Suuqaiphrasing-ka ma istiraatiijiyad weyn baa? | Martech Zone
Talaado, September 18, 2012 Wednesday, September 19, 2012 Douglas Karr
Eeg sida aan ku sameeyay taas? waan qaatay Suuq- iskuna darsaday Oraahda. Cute, huh? Ma hubo in qof uun uu erey u sameeyay istiraatiijiyadda suuqgeynta si ereyo looga sameeyo… marka waan sameeyay.
Xeerbeegtida wali way maqan tahay haddii aan shakhsi ahaan rabo inaan isticmaalo istiraatiijiyaddan (iyo wixii ka dambeeya qoraalkan). Waxay umuuqataa in dadyowgu meelkasta oo ay joogaan ay kafekerayaan ereyo cusub oo ay ku sharaxayaan aragtidooda ama wax soo saarkooda. Maaha wax cusub. Ku soo noqoshada 50-meeyadii… wax walboo waxay ahaayeen wax-o-matic, bixinta dareen otomaatig ah. Hadda waxay umuuqataa in qof kastaa uu si isku mid ah u garaacayo dhawaaqyada, ama ereyada weedho suuqgeyn cusub ah.
Ma doonayo inaan soo bandhigo midna maadaama qaar ka mid ah ay caqli badan yihiin. Waana aaminsanahay inay taasi fure u tahay… waa inay noqdaan kuwo xariif ah (ha qiimeyn suuq geynta). Markii aan su'aasha hordhigay qaar ka mid ah hogaamiyaasha warbaahinta bulshada, waxay igu jawaabeen inay dambi leeyihiin… badanaa waxay isku dayeen inay samaystaan ​​jumlado cusub oo suuq geyn ah si ay uga caawiyaan xeeladooda.
Jeff Widman sheegay inuu dambiile ahaa inuu iyaga ka dhigo. Iyo Jason Keath, Maamulaha guud ee Social Fresh, wuxuu keenay qodobo aad u wanaagsan oo lagu taageerayo istiraatiijiyadda. Jason wuxuu siiyay 3 faa iidooyin si loo abuuro mid gaar ah iyo kala sooc marketiphrase. Isagu ma uu ogayn in aan sameeyay muddadaas markii aan ka hadlay… iyo sharraxaadda ku xigta mid kasta oo ka mid ah aniga ayaa leh:
Hogaaminta aragtida - waxay ku siineysaa aragti ah inaad mowduuc si qoto dheer uga fikireyso oo aad u marayso waddo aan weligeed la soo marin.
Sumcad xumo - hadday fikraddu faafto, waa eray u dhigma magacaaga, shirkaddaada, wax soo saarkaaga ama adeeggaaga.
Dhiciyaan Search Engine - hadaad ereyga alifto, eraygaas khadka tooska ah ayaa lagugu xiri doonaa. Mar labaad, haddii uu faafo, dadku waxay kaa helayaan tartan kasta.
WARSIDAHA: Brian Carter la imid qaar ka mid ah suuqyada ugu fiican suuqa 'marketiphrase' neomarketinglogism… Ama aflagaadada abidkeed neogurulogism.
Maxaad ugu jeceshahay uguna yartahay suuqyada?
Diyaar ma u tahay Ciidaha
Sep 18, 2012 at 12: 02 PM
Tweetup waxaa qoray Scott Monty
Sep 18, 2012 at 12: 03 PM
Sep 18, 2012 at 12: 12 PM
Xikmad yar laakiin ficil badan. Waxaan leeyahay saaxiibo neceb erayga laakiin waan jeclahay. Badanaa maxaa yeelay waxay si fiican isugu dubarideysaa iibka gudaha iyo dibedda.
Sep 18, 2012 at 1: 27 PM
Inbound waa astaan ​​gaar loo leeyahay oo suuq geyn ogolaansho ah waa astaan ​​gaar loo leeyahay oo suuq geyn ah. Taasi waxay tiri, wali waa habka aan ugu jeclahay inaan ku sharaxo dhinaca jiidaya. Hadda qof ayaa u baahan inuu ku gabyo oo ku heeso "suuq-geynta dibadda" kor si adduunka oo dhan ee suuq-geynta internetka ay u fududaan lahayd sharraxaadda macaamiisha. Had iyo jeer waxaad u maleyneysaa Hubspot inuu sameyn doono.
Sep 18, 2012 at 2: 57 PM
Haddana shirkado badan ayaa ku takhasusay "suuq geynta gudaha" dhammaantood ka faa'iideysanaya HubSpot.
Sep 18, 2012 at 4: 05 PM
Ilaa ay dadku u tagaan si ay u hubiyaan oo ay u ogaadaan inay ka heli karaan waxa ay uga baahan yihiin Google Analytics iyaga oo aan u bixin $ 250 bishii barnaamijka:
Sep 18, 2012 at 4: 09 PM
Hubspot waa quruxsan yahay, in kastoo! Falanqaynta kaliya ayaa si daacadnimo ah ugu habboon qiimaha.
Sep 18, 2012 at 4: 17 PM
ogolaaday. Waan jeclahay qorshahooda suuq geynta iyo qaabka laakiin, waan dunno. Waa inaan mar kale fiiriyaa. Mudo ayey ahayd.
Sep 18, 2012 at 5: 08 PM
Hubspot waa barnaamij quruxsan oo adag. Xalkooda falanqaynta waa 5-10% waxa ay bixiyaan. CRM, emayl, hoggaanka gen, baloog garaynta, fikradaha SEO iyo waxyaabo badan oo dheeri ah. Waxay sidoo kale cusbooneysiinayaan si ka dhakhso badan qaar badan oo ka mid ah otomaatigooda suuq geynta iyo tartamayaasha CRM.
Sep 18, 2012 at 5: 14 PM
Sug? CRM ma iyagaa iska leh mise iyagu waa calaamado cad oo Sonkor ah? Sidee u shaqaysaa?
Sep 18, 2012 at 5: 24 PM
Waxay leeyihiin maamule u gaar ah CRM / xiriiriyeyaal diiradda saaraya hoggaanka hiddaha hoggaanka iyo emaylka. Waxayna ku milmayaan dhammaan CRM-yada waaweyn ee aan ogahay taas korkeeda. Isku mid ah labada dhinacba.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sii deynta ugu dambeysay: http://www.hubspot.com/blog/bid/33574/Get-to-know-HubSpot-3-A-look-at-some-of-the-standout-features
Sep 18, 2012 at 5: 53 PM
ahhh. ok Taasi waa qabow
Sep 18, 2012 at 12: 11 PM
Tweetup xaqiiqdii waa guuleyste… dabcan isbarbar dhigga kulanku wuxuu ahaa mid xariif ah.